पल्स अक्सिमिटरको प्रयोग कसरी गर्ने ? – नेपाली संगसार
नेपाली संगसार calendar_today ७ जेष्ठ २०७८, 3:33 pm
प्रयाेग कसरी गर्ने ?
–अक्सिमिटरलाई दिनहुँ प्रयोग नगरौं ।
–यदि नेल पोलिस लगाउनुभएको छ भने त्यसलाई हटाउनुहोस् ।
–एउटै हातको औलामा मात्र नभई हातको अर्को औलामा पनि मीटर लगाएर जाँच गर्नुहोस् ।
–दुई तीन पटक परीक्षण गर्दा जुन सबैभन्दा बढी रिडिङ आउँछ, त्यसैलाई सही मान्नुहोस् ।
–करिब ७ मिनेटसम्म हिँडडुल गरौं । यसपछि अक्सिमिटरको प्रयोग गरेर लेभल जाँचौं ।
–यदि हिँडडुल गरेपछि अक्सिमिटरमा अक्सिजनको लेभल चार प्रतिशतसम्म कम देखियो भने बाँकी परीक्षण जरुरी हुन्छ ।
–यदि हिँडडुलपछि लेभल ९४ माथि आउँछ भने चिन्ता गर्नुपर्ने केही छैन, तपाईं ठीक हुनुहुन्छ ।
–आफ्नो लक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
–आरम गर्नुपर्छ ।
–राम्रो डाइट लिनुपर्छ ।
–यी सबै हुँदाहुँदै पनि अस्वस्थ महसुष गरिरहनुभएको छ भने चिकित्सकसँग भेट्नुपर्छ ।